Cisco inogadzira yakavhurika sosi chishandiso chekuchengetedza iyo boot chikamu kubva pakurwiswa | Linux Vakapindwa muropa
Cisco inogadzira yakavhurika sosi chishandiso chekuchengetedza iyo boot chikamu kubva pakurwiswa
Cisco yakagadzira yekudzivirira maitiro pakurwisa kwakanangiswa kune tenzi boot rekodhi sosi yakavhurwa. Ichi chishandiso chinogona kuvharira rudzikunuro uye mamwe mapurogiramu akaipa anoda kutapudza akadaro MBR chikamu. Kunyangwe chiri chishandiso chakagadzirirwa Microsoft Windows masisitimu anoshanda uye iri blog yeLinux, asi isu tinowanzo kupa nhau nezve yemahara uye yakavhurwa sosi software mune zvese.
Icho chishandiso chiri mubvunzo inonzi MBRFilter uye inoshanda nekusaina iyo diski system uye nekuisa iyo chikamu mune yekuverenga-chete maitiro kuitira kuti igogona kungoverengwa uye kudzivirira vatatu vega vaine chinangwa chakaipa kubva kunyora kodhi kwariri kune zvimwe zvinokatyamadza zvinangwa. Chinhu chakanaka ndechekuti Cisco yakaigadzira pasi peyakavhurika-sosi uzivi uye mushanduro dzese makumi matatu nematanhatu nemakumi matanhatu nematatu. Unogona kuongorora kodhi nekuwana iro peji rerojekiti paGithub.
Kunyangwe isu tave kurarama munguva yeEFI, kune avo vasati vaziva kuti MBR chii kana chave (mune masisitimu aneBIOS), taura kuti chikamu chakakosha chedisk disk uye kuti ine kodhi inoitiswa yakachengetwa mu yekutanga hard drive chikamu chekukwanisa kuvhura kana bhuti bhuti loadero boot loader yeiyo inoshanda sisitimu (mune ino kesi Windows). Ruzivo nezve diski, zvikamu uye iyo faira sisitimu iyo yawakamisikidzwa inogara imomo.
Ehe, ino chikamu chakakomborerwa apo matsotsi mazhinji akaiswa kuti aite kurwisa kwavo uye nekuita kuti malware igare munzvimbo iyoyo, zvichikonzera matambudziko pamakomputa ane hutachiona anga asina mhinduro iri nyore. Mune zvimwe zviitiko zvaidikanwa kumisikidza komputa kana mune yakanakisa kesi kushandisa mamwe maturusi kubvisa izvo zvinoshungurudza izvo zvakaramba zvakavanzwa kune akawanda antivirus (ona bhuti kana boot-level rootkits). Iye zvino Cisco inoda kudzivirira izvi nechishandiso chayo uye nekupa chengetedzo shoma ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Cisco inogadzira yakavhurika sosi chishandiso chekuchengetedza iyo boot chikamu kubva pakurwiswa
Sabayon 16.11 yakaburitswa neLinux Kernel 4.8
Quantum, injini nyowani yeMozilla Firefox yaunzwa